किन चुनौती बनिरहेछ प्रदेश २ मा लकडाउन? – Health Post Nepal
किन चुनौती बनिरहेछ प्रदेश २ मा लकडाउन?
२०७७ वैशाख ६ गते १६:१३
कोरोनासँग जुध्न अझै ‘तयार’ छैन प्रदेश २
सप्तरीबाट सिमानाका मस्जिदहरूमा बस्दै-बस्दै वीरगन्ज आइपुगेका थिए संक्रमित भारतीय
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, ‘लकडाउन’। पूरै विश्वले पछ्याइरहेको यो विकल्पलाई भने प्रदेश नं. २मा निकै अटेर गरिएको छ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा समेत यसको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन् भने ग्रामीण भेग झनै अस्तव्यस्त देखिएको छ ।
सरकारको निर्देशनअनुसार ‘लकडाउन’ पालना गराउन हिंडेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई कतिपय स्थानमा चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । केहीदिनअघि ‘लकडाउन’ उल्लंघन गरी सडकमा डुली रहेका युवाहरुलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने एक प्रहरी हवल्दारमाथि जनकपुरमा आक्रमण भयो । दईजना युवकले ढुंगाले प्रहार गरेपछि प्रहरी हवल्दारको टाउकोमा ६ वटा टाँका लगाउनु पर्‍यो ।
‘लकडाउन’ पालना गराउन सिरहामा प्रहरीले २३ राउण्ड हवाइ फायर नै गर्नुपरेको छ । सिरहा नगरपालिकाको पटेर्वामा भीडभाड गरेर बसेका स्थानीयहरुलाई घरभित्र बस्न भनेपछि प्रहरीमाथि आक्रमण भयो र स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले २३ राउण्ड हवाइ फायर गर्नु परेको थियो । घटनामा संलग्न रहेका १३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अन्य फरार छन् भने गाउँ सुनसान छ । ‘लकडाउन’ पालनाको नाउँमा प्रहरीले ज्यादति गरेको त्यहाँका स्थानीयहरुको आरोप छ ।
हुन त कतिपय स्थानमा स्थानीयहरुले स्वयं गाउँ प्रवेश गर्ने नाकामा बार लगाएर अपरिचित व्यक्तिहरुको आवतजावत बन्द गरेका छन् । कोरोना संक्रमणको त्रासले उनीहरुले गाउँलेबाहेकलाई गाउँभित्र छिर्न दिएका छैनन्।
तर, अधिकांश स्थानमा ‘लकडाउन’ को पूर्ण पालना हुनसकेको छैन् । जनप्रतिनिधिहरुले पनि ‘लकडाउन’ को महत्व र आवश्यक्ताबारे जनतालाई बुझाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।
कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधिहरु स्वयं ‘लकडाउन’ उल्लंघन गरी सामाजिक दूरी कायम गरेका छैनन् । कोरोनाका शंकास्पदहरुलाई राख्न स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइन जनप्रतिनिधिहरुले तामझामका साथ उद्घाटन गरेका तस्बिरहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
राजपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रानीशर्मा तिवारीले चारदिनअघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकामा कोरोना शंकास्पदहरुलाई राख्न स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइनको रिबन काटेर उद्घाटन गरिन् । क्वारेन्टाइन उद्घाटन गर्दा सामाजिक दूरीको कुनै ख्याल गरिएको थिएन् । सहभागी अधिकांशले मास्कसमेत प्रयोग गरेका थिएनन् ।
आफ्नो चाहना नभएपनि गाउँपालिका अध्यक्षको दबाबमा क्वारेन्टाइनको उद्घाटन गर्नुपरेको तिवारी बताउँछिन् । अहिलेको संवेदनशील समयमा ‘लकडाउन’ को पालना र सामाजिक दूरी कायम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र लाभपनि अहिलेको अवस्थामा जरुरी रहेपनि ‘लकडाउन’ पूर्णरुपले पालना हुन नसकेको बताउँछन् । आफ्नै सुरक्षाको लागि भएपनि आमनागरिकले वास्ता नगर्दा ‘लकडाउन’ कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको लाभको भनाइ छ ।
‘व्यावसायीलाई आफ्नो सामान बेच्नुपर्ने छ, उपभोक्तालाई खरिद गर्नुपर्ने छ, सामाजिक दूरी कायम गराएर सामान खरिद बिक्री गर्ने रणनीति स्थानिय प्रशासनले बनाउन आवश्यक छ, तर त्यसो भएको देखिँदैन,’ लाभ भन्छन् ।
‘लकडाउनप्रति मानिसमा अझै गम्भीरता आएको जस्तो लाग्दैन, कोरोना संक्रमणबाट जोगिन हामी सबैले यसको पालना गर्नु जरुरी छ,’ उनी भन्छन् । ‘लकडाउन’ उल्लंघन गर्नेहरु आफूमात्र नभएर अरुलाई पनि जोखिममा पार्ने काम गरिरहेको लाभले बताए ।
‘लकडाउन’ पालना गराउन प्रशासनले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उनको कथन छ । ‘सहरको मुख्य चोकहरुमा मात्र बसेर ‘लकडाउन’ पालना हुँदैन्, गल्ली गल्ली र ग्रामीण भेगसम्म सुरक्षाकर्मी पुग्नु प¥यो, नयाँ रणनिती बनाएर काम गर्नु जरुरी छ,’ लाभले भने,‘‘लकडाउन’ लाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने प्रदेश २ जोखिममा पर्ने निश्चित छ ।’
‘लकडाउन’ को अवधिमा विभिन्न स्थानमा झडप हुनुपछाडी सुरक्षाकर्मीका साथै आमनागरिकको अतिवाद सोँच रहेको लाभको बुझाइ छ । ‘सुरक्षाकर्मीलाई आफूले भनेको ठीक जस्तो लागेको छ भने आमनागरिकले ठीक विपरित सोचेको हुनुपर्दछ, दुबैको अतिवादका कारण झडप भएको हुनुपर्दछ,’ उनी थप्छन्,‘तर, समग्रमा लकडाउन, सामाजिक दूरीजस्ता कुरा हाम्रै लागि हो भनेर बुझ्नु पर्दछ । कोरोनाबाट जोगिन यसको पालना गर्नुको विकल्प छैन् ।’ आमनागरिकलाई ‘लकडाउन’ र सामजिक दूरीबारे बुझाउन जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
Tags: प्रदेश २